နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Google New Features Rolling Out!
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:20 PM
PAUK April 1, 2011 at 9:52 PM
khin oo may April 2, 2011 at 12:33 AM
သိတ်စိတ်မဝင်စားဘူး ဂျီမှ သိတ်မလုပ်တာ။
khin oo may April 2, 2011 at 12:35 AM
Dust bin ထဲထည့်တဲ့သူက ရှိသေးတယ်။ wasted.
energy မဖြုန်းတီးလိုပါဘူး save လုပ်ရမယ်။ ကြည့်ရတာ စကားမပြောနိုင်တဲ့သူတွေ သုံးတဲ့ body language နဲ့တူနေတယ်။
khin oo may April 2, 2011 at 12:32 PM
(ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့ by ကုမ်ရာသီသူ သူရှင်းပြထားတယ်။)
khin oo may April 2, 2011 at 12:33 PM
မနေ့ကှရှင်းပြတာဘဲဖတ်သွားတာ။ မ try သွားဘူး။
Ko Boyz April 2, 2011 at 1:09 PM
မ try ဘူးဆိုတာ try သွားလို့ပေါ့နော်...။